Murashax Farmaajo Oo Lagu Taageeray Banaanbax Ka Dhacay Muqdisho Iyo Saadaasha Doorashada | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > SOMALI ELECTIONS	> Murashax Farmaajo Oo Lagu Taageeray Banaanbax Ka Dhacay Muqdisho Iyo Saadaasha Doorashada
Monday, September 10, 2012 Laaska News
Banaanbaxa si wanaagsan loosoo qaban qaabiyay oo lagu taageerayo murashax Farmaajo ayaa waxaa ka dhigay magaalada muqdisho dadweyne farabadan oo sita suuradaha murashax Farmaajo, kuwaas oo kakala yimid degmooyinka Gobolka Banaadir, sida lagu sheegay warbaahinta qaranka.
Banaanbaxan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo maalinta barri ah ay dhacayso doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ay u tartamayaan 24 ka musharax ee uu kamid ayahay Murashax Farmaajo.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in dadweynaha banaanbaxay ay socod ku tageen halka ay waddooyinka badan ku kala leexdaan ee loo yaqaan Lambar 4, dadkaas oo la sheegay inay kasoo dhaqaaqeen halka ugu sarreysa joogga magaalada ama meel aan waxba ka fogayn ee isgoyska Sayidka ee u muuqata xaruunta golaha shacabka (guriga Umadda) ee fadhiga u ah mudanayaasha Baarlamaanka cusub.
Mr. Farmaajo ayaa waxaa lagu xusuustaa Golihiisii Wasiirada ee uu dhisay ee ay kawada dhaxeysay wada shaqayntu iyo sida xukuumaddaasi ay ubuurtay , una kasbatay shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba ayna u abuurtay inay soo noolayso bulsho kala duwan oo leh dareen wadaniyeed, dal iyo dibadna ka dhigay banaanbax waqtigaa looga soo hor jeeday isbadalka siyaasadeed ee xilligaa ay la kulantay xukuumaddiisu.
Waxaase kasii daran oo mudan in la xusuusto sida ay xukuumaddaasi ay Soomaali ku dhaaftay waqtigaa !!!
Waxaase xusid mudan in la ogaado in dalku u baahan yahay ciidan qaran oo soo celiya haybaddii iyo qaranimadii Soomaaliya, la’aantoodna aan ninna uusan kursiga sharaf ugu fadhinayn,muwaadinka Soomaaliyeedna uu wali raadinayo cid uu aamino , ileyn wixii kasoo hara waa beelo!!!!!!!!!
Dal aan ciidan qaran lahayn waa inay shacabkiisu noqdaan dad u noolaada sida duur joogta ama shacab iyo dal dusha laga ilaaliyo ama gala gumaysi !!!!!!!!!
Mase la’arki doonaa murashax Shariif (President Shariif) oo u muuqda nimaan darka wali ka baxin, arrimo jira awgood inay codka isku shubtaan..haddii la waayo in beelina ay keeni weyso murashax kaliya ama musharxiintu isku tanaasuli waayaan aroorta amase aanay jirin cadaadis kale iyo isku-soo-boodyo kale!!.
Murashaxiinta kalase manoqon doonaan kuwa midooba oo u babac dhigi kara murashax Shariif oo hadda si fiican ula qabsaday dawladnimadii, saddexdii bilood ee u dambaysana usoo jeestay gudaha iyo gobolada, deegaanno farabadanna ay gaadhay siyaasaddiisi!!!!!!
Banaanbax Lagu taageerayo Murashax Farmaajo Oo Ka Dhacay Muqdisho (Sept. 9, 2012) – SAWIRRO Murashax Shiikh Shariif Oo Casuumad Ku Qabtay Muqdisho,Afhayeenkii Hore Ee Baarlamaanka Oo Taageeray